‘लिलिबिली’को शिर्ष गीतमा जसितालाई फकाउँदै प्रदीप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘लिलिबिली’को शिर्ष गीतमा जसितालाई फकाउँदै प्रदीप
काठमाडौं । चलचित्र ‘लिलिबिली’मा समावेश दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको शिर्ष गीतलाई भ्यालेन्टाईन डेको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्रको ‘घुम्न जाउँ है इन्जिन गाडीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । स्कटल्यान्डमा छायाँकन गरिएको यो गीतमा नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङ फिचरिङ छन् । एसडी योगीको स्वर तथा संगीत रहेको गीतको शब्द ‘एकतारे’ले लेखेका हुन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफीमा सुदिप बरालले भिडियोलाई खिचेका हुन् ।
मिलन चाम्स निर्देशत चलचित्र ‘लिलिबिली’लाई निर्देशक चाम्स, गोविन्द शाही र सुदीप खड्ले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन । चलचित्रमा प्रदिप र जसितासंगै प्रियंका कार्की, अनुपविक्रम शाही, सविन श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, ध्रुव दत्त, रितेश चाम्स लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चैत्र ३० गतेबाट रिलिज हुने चलचित्रमा चन्द्र पन्तको एक्सन, अर्जुन जीसीको सम्पादन छ ।